राधी विद्युत कम्पनीको नाफा २१ प्रतिशत बढ्यो - Aarthiknews
राधी विद्युत कम्पनीको नाफा २१ प्रतिशत बढ्यो
म्काठमाडौं । राधी विद्युत कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले रू. ४ करोड ३४ लाख ९४ हजार खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा कम्पनीको नाफा २१ प्रतिशत बढी भएको हो । गत वर्ष कम्पनीले रू. ३ करोड ५८ लाख ४४ हजार नाफा गरेको हो ।